USteve Jobs: I-infographic | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 14, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Ndiyazi ukuba oku akunanto yakwenza nokuthengisa, kodwa ndingumntu othanda iApple kangangokuba kuye kwafuneka ndipapashe le Steve Jobs Infographic. Sele ndibhalile amanqaku am kwiingcinga zam malunga Ukusweleka kukaSteve Jobs, kwaye senza a Zoomerang uphando olubonisa ukuba abantu babenjalo ndinethemba ngekamva lika-Apple.
Le infographic evela Ihlabathi le-infographic ibonelela ngembali eneenkcukacha zombini uSteve Jobs kunye neApple. Yenziwe kakuhle ngokwenene!
Iphephancwadi elinentambo likhuphe i I-eBook kwi-anthology kaSteve Jobs ikho nge-iPad, Kindle, kunye neNook umbala.
IArgyle yezeNtlalontle: UkuKhangela ukuKhangela kunye neMidiya yoLuntu